Bike Flag Bracket
YeduBhasikoro mureza bracketiri nyore uye nyore kuisa pabhasikoro rako, nekushandura mireza yakasiyana kuti ivebhasikoro kuchengetedza mureza or bhasikoro advertising mureza mureza, iyi yekumashure yakaiswabhasikoro mureza murezainzira huru uye inodhura yekushambadza bhizinesi rako chero kupi kwainoenda bhasikoro.Bicycle Banner Flagsvari kushambadza mukufamba!
Applications:Maresitorendi ekutora, Kugadziriswa Kwefoni, Zvitoro zveKofi, Zviitiko zvekusimudzira, Fairs nezvimwe.
Yakajairika uye yechinyakare mhando yemabhasikoro mireza inoita kuti bhasikoro rako rionekwe zvakanyanya kune vamwe nekukwira inochinjika tyava tsvimbo mureza pabhasikoro.
Yedu bhasikoro mureza bracket haisi chete kushandiswa bhasikoro kuchengetedza mireza, asiwo advertising kuratidza misodzi kana minhenga mireza iyo inobvumira nzvimbo yakawanda kuti iwe kugadzira uye kudhinda meseji yekusimudzira.
Bike advertising mureza mabhena ari nyore kuisa uye kubvisa kubva bhasikoro rako pasina chero maturusi
The bhasikoro mureza bracket rakagadzirwa upfu coated aruminiyamu, azere kureba 60cm nechokwadi mureza uri kure kumusana kwako.
Yedu bhasikoro mureza danda rinogona kutsigira maviri mureza maumbirwo, minhenga uye misodzi mune imwecheteyo sisitimu, iyo inogona kuchengetedza mutengo wako uye kuchinja pane chikumbiro chevatengi.Kureba kwekuratidzira i2m.Mireza inogona kudhindwa tsika.
(1) Inokurumidza uye iri nyore kuisa uye kubvisa, yakakodzera chigaro post DIA.kubva 26-30 mm
(2) Chengetedzo inoratidzira mwenje pamagumo ebhuraketi chubhu
(3)Dynamic uye yekuona kushambadzira ine diki investment.
(4) Eco-hushamwari zvinhu uye maitiro pasina chero kusvibiswa.
Item code Size Kurema
Zvakapfuura: Backpack Deluxe - W
Zvinotevera: Gomo reMasvingo
Fence mureza bracket